नेपाल आज | राम्रोसँग भात खान नजान्ने बच्चाले पनि फिल्म निर्देशन गरेका छन्, अनि कसरी चल्छ फिल्म ! (भिडियो)
मेरो परिवार मेरो कथा भिडियो मनोरञ्जन
राम्रोसँग भात खान नजान्ने बच्चाले पनि फिल्म निर्देशन गरेका छन्, अनि कसरी चल्छ फिल्म ! (भिडियो)
शनिबार, ०९ असार २०७५ गते प्रकाशित - नेपाल आज
काठमाडौं । रमा थपलिया, धेरै नेपालीको घर घरमा टेलिभिजनको पर्दामार्फत पुग्ने कलाकार थिइन् । ‘हिजोआजका कुरा’ धारावाहिकबाट लोकप्रिय भएकी कलाकार थपलियाको कलायात्राले ३० वर्ष काटिसकेको छ । घरमा सहयोगी पतिको साथले कला क्षेत्रमा यति समर्पित भएर काम गर्न सकेको रमाको अनुभव छ ।
१३–१४ वर्षकै उमेरमा विवाह बन्धनमा बाँधिएकी रमाले १६ वर्षको उमेरमा त जेठी छोरीलाई जन्म दिइसकेकी थिइन् । काठमाडौंमा एकजनाको मात्रै कमाइले टिक्न गाह्रो हुन्छ । स्वभाविक पनि हो, रमाको जीवनमा पनि त्यस्तै भयो । नर्सिङ कलेजमा ८ वर्ष काम गरिन् । त्यसपछि फिल्म क्षेत्रमा काम थालिन् ।
उनी भन्छिन्, ‘म अहिले जुन स्थानमा बसेर आत्मसम्मानपूर्वक बाँचिरहेकी छु, यसका लागि धेरै मेहनत गर्नु पर्छ । मेहनत गर्न नसक्नेहरुले दुई नम्बरी बाटो पनि रोज्छन् ।’
रमाले मेहनत गरिन् । पति टिचिङ अस्पतालमा काम गर्थे । डेप्युटी डाइरेक्टर भएर सेवा निवृत्त भए । तर रमा निवृत्त भएकी छैनन । उनलाई अहिले पनि कामको अफर आइ नै रहेको छ । कला क्षेत्रमा निरन्तर काम गरिरहेकी छन् ।
सरल लवजमा राम्रो फिनिसिङसहित डाइलग डेलिभरीमा दक्ष रमाको अभिनयबारे यसभन्दा थप केही भनिरहनु पर्दैन किनभने उनका दर्शकहरुले सधै प्रशंसा गरेका छन् ।
हिजोआजका कुराको गर्दै रमाले भनिन्, ‘दश वर्ष काम गर्यौं हिजोआजका कुरामा । त्यो बेला दर्शकहरुले धेरै रुचाउनु हुन्थ्यो । त्यो बेला प्रतिस्पर्धा धेरै थिएन । अहिले धेरै च्यानल खुले । फिल्म, टेलिफिल्ममा पनि नयाँ भाइबहिनीहरुले राम्रो गरिरहनु भएको छ ।’
नेपालमा फिल्महरु धेरै बनेका छन् । तर गुणस्तरमा ध्यान नपुगेको रमाको बुझाइ छ । उनले भनिन्, ‘अस्ति नै एक जना सात वर्षको बच्चाले फिल्म निर्देशन गरेको हामीले सुन्यौं । भात पनि राम्रो खान नजान्नेले के फिल्म निर्देशन गर्यो होला त ? यसरी हचुवाको भरमा सिनेमा बनाउँदा चल्दैन ।’
मायाजाल नामक फिल्म रमाको डेब्यु थियो । त्यो सिनेमामा काम गर्दा उनी २५ वर्षकी थिइन् । तर उनले सारंगा श्रेष्ठको सासुको भूमिका निर्वाह गरिन् । उनले त्यो बेलाको स्मरण गर्दै भनिन्, ‘चाहना त हिरोइन भएर काम गर्ने थियो । तर मलाई आमाको रोल दिइयो । मैले गरेँ । सबैले तारिफ गरे । त्यसपछि त सधै आमाको रोल पाएँ । अहिले त हजुरामाको रोलमा फिट हुने बेला भयो ।’
कलाकार रमा थपलिया हिजोआजका कुरा